Rooble" Mawqifkaygu mabda'iyan waxa uu yahay in kiiska Ikraan uu helo baaritaan lagu kalsoon yahay " - Radio Risaala: Somali News Online
Home Wararka Rooble” Mawqifkaygu mabda’iyan waxa uu yahay in kiiska Ikraan uu helo baaritaan...
Rooble” Mawqifkaygu mabda’iyan waxa uu yahay in kiiska Ikraan uu helo baaritaan lagu kalsoon yahay “
Raysalwasaare Rooble waxa uu Qaramada midoobay usheegay inaanu ka laba labayn doonin dedaalada uu cadaalada ugu raadinayo Ikraan Tahliil.
“Mawqifkaygu mabda’iyan waxa uu yahay in kiiska Ikraan uu helo baaritaan lagu kalsoon yahay oo madax bannaan iyo in dhammaan caqabadaha hortaagan in caddaalad loo helo Ikran iyo qoyskeeda meesha laga saaro.”
Waxaa uu sidoo kale sheegay in uu wado dadaallo kala duwan oo ku aadan sidii looga hortagi lahaa in uu sii faafo khilaafka ka dhex taagan asaga iyo Madaxweyne Farmaajo.
Raysalwasaare Rooble ayaa adkeeyay in kiiska ikraan aan la siyaasadeyn ee kaliya loo arko xaq uu leeyahay muwaadin Soomaaliyeed oo ay tahay in isku aragti laga ahaado.
Previous articleDeni oo kala diray Golihii degaanka Qardho maamulna u Magacaabay
Next articleRa’iisulwasaare Rooble oo amray dedejinta doorashada xildhibaanada Waqooyi